အားပေးတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ငယ်ဘဝဓာတ်ပုံကိုမြင်တာနဲ့ တန်းမှတ်မိနိုင်ပါ့မလား? (အပိုင်း ၁) | News Bar Myanmar
အားပေးတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ငယ်ဘဝဓာတ်ပုံကိုမြင်တာနဲ့ တန်းမှတ်မိနိုင်ပါ့မလား? (အပိုင်း ၁)
ပရိတ်သတ်အများစုဟာ ကိုယ်အားပေးတဲ့ အနုပညာရှင်ကိုနောက်ကျောလေးမြင်ရရုံနဲ့ မှတ်မိနိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့ငယ်ငယ်တုန်းကပုံတွေမြင်ရင်ရော ဘယ်သူလဲဆိုတာတန်းခန့်မှန်းနိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ မခန့်မှန်းနိုင်ရင်လဲ သဲလွန်စလေးတွေဖတ်ကြည့်ကြပါနော်။
သူကတော့ လက်ရှိမှာ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသဲစွဲမင်းသားတစ်လက်ပါ။ ဖြူဖွေးတဲ့အသားအရည် ပိန်သွယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ် မြင့်မားတဲ့အရပ်နဲ့ ခန့်ညားလွန်းတဲ့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်ကြီးပါ။ ငယ်ရုပ်သိပ်မပျောက်တာကြောင့် အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါတယ်။
Kpop ကိုကမ္ဘာကသိစေခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးအဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးပါ။ အခုထိလဲ တစ်ကိုယ်တော်အနေနဲ့ရော လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်နေသလို သူမဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေအားလုံးနာမည်ကြီးပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ခန့်မှန်းမိနေကြပြီ ထင်ပါတယ်နော်။
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး လက်တလောမှာမှ ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်တစ်ခုနဲ့ သဲသဲလှုပ်အားပေးခံနေရတဲ့ ခန့်ချောကြီးပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အချောကြီးပါနော်။ ပါးချိုင့်ကြီးမြင်တာနဲ့ ဘယ်သူလဲသိသာနေပါပြီ။
အဆိုတော်အနေနဲ့ရော သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ရော အောင်မြင်နေတဲ့ ကြယ်ပွင့်လေးတစ်ပွင့်ပါ။ အလှူအတန်းလဲ အရမ်းရက်ရောပါတယ်။ အားလုံးချစ်တဲ့သူမကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက မျက်နှာလေးနဲ့ အခုထိချစ်စရာကောင်းနေပါတယ်။
ဒိတ်ဒိတ်ကျဲအောင်မြင်နေတဲ့ ယောက်ျားလေးအဖွဲ့က ပျိုမေတွေရဲ့အသဲစွဲလေးပါ။ ငယ်ငယ်ကရော အခုရော ချစ်စရာကောင်းသလို ဂီတမှာလဲထူးချွန်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲအချို့မှာလဲ ပါဝင်ဖူးပါတဲ့ သူကတော့ အခုလဲငယ်ငယ်တုန်းက မျက်နှာအတိုင်းပါပဲ။
ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့လဲ ဒီကလေးလေး ၅ ယောက်လုံးကို လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ တွဲမိတယ်ဆိုရင် comment လေးတွေပေးသွားကြပါဦးနော်။ အဖြေတွေအားလုံးမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ တကယ့်ကိုဆရာကြီးပါပဲ။
Next Kpop လောကထဲက ပြောမနာဆိုမနာသူငယ်ချင်းအရင်းများ (အပိုင်း ၁) »
Previous « ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် IU လုပ်လေ့ရှိတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အကျင့်လေးတစ်ခု